Hal Sano Ka Dib Dilkii Laba Shaqaalaheenna Ka Mid ah Loogu Geystey Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
© Yahya/MSF Photos of Philippe and Kace
29ka Disembar 2012 – Waa waqti murugo aad u weyni aan dareemeyno iyada oo ururka Medecins Sans Frontieres (MSF) uu xusayo markii sanad ay ka soo wareegatey dilkii loo geystey laba shaqaalihiisa ka mid ah,oo kala ahaa Philippe iyo Kace, oo si naxariis-darro ah loogu diley Muqdisho.
Philippe Havet, oo ahaa 53 sano jir isuduwe hawlaha degdegga ah oo ka socdey dalka Biljim, iyo Andrias Karel Keiluhu (“Kace”), oo ahaa 44 sano jir dhakhtar caafimaad ah oo ka socdey dalka Indonesiya, waxaa ay la shaqeynayeen kooxaha MSF si ay gargaar caafimaad oo degdeg ah u siiyaan dadka barokacayaasha ah iyo kuwa degaankaba.
“Philippe iyo Kace si weyn ayaan u tabeynaa waxaana maanta tacsi tiiraanyo leh mar kale u direynaa qoysaskooda iyo saaxiibadooda,” ayaa uu yiri Agaasimaha Guud ee MSF Christopher Stokes.
Ka dib dilkii naxdinta lahaa ee loo geystey saaxiibadeenna shaqada, MSF waxaa ay go’aansatey in ay xirto laba ka mid ah xarumihii caafimaadka ee ugu weyntaa ee ay ku lahayd caasimadda Soomaaliya. Haseyeeshee, MSF waxaa ay 10 mashruuc weli ka sii waddaa guud ahaan dalka waxaana ay gargaar caafimaad iyo mid bani’aadamnimo siineysaa kumanaan qaxooti Soomaali ah oo jooga xerooyinka ku yaalla xuduudda dhinaceeda kale ee Itoobiyo iyo Kenya.
Maanta, laba kale oo ka mid ah shaqaalaha MSF, oo kala ah Blanca Thiebaut iyo Montserrat Serra, ayaa iyaga oo aan raalli ka ahayn weli lagu haystaa Soomaaliya ka dib markii laga qafaashey xerada qaxootiga Dhadhaab, Kenya, 13kii Oktoobar 2011. Mar kale MSF waxaa ay cambaareyneysaa falkaas cunfiga ku dhisan waxaana ay dalbaneysaa in degdeg loo sii daayo.